Bhizinesi rega rega rinoda account yekutarisa.
Kunyangwe iwe uri kuita yekutanga, bhizinesi diki, single-nhengo chete proprietorship, kana chikamu hustle, iwe unofanirwa kusiyanisa yako bhizinesi kutengeserana kubva kune yako pachako mari.
Kwechikamu chikuru, bhizinesi rekutarisa account rinoshanda zvakafanana neakaundi yekuongorora. Nekudaro, maakaundi ekutarisa ebhizinesi anowanzove nemari yekuwedzera, zviyero zvishoma zvebhinari, uye miganho yekutengesa pamwedzi.
Saka usati wavhura account nyowani, zvakakosha kuti iwe uwane bhanga rinosangana nezvinodiwa zvebhizinesi rako.
Pamusoro Gumi yepamusoro Yekutarisa Bhizinesi Maakaundi e10
Kune mazana, kana asiri zviuru, zvebhizinesi rekutarisa maakaunti pamusika nhasi. Kubva kumabhangi madiki emuno kuenda kumahombekombe makuru epasi uye online-chete mabhangi, kune chaizvo gumi gumi maakaunzi andingafunga nezvazvo.
Chase Yese Bhizinesi Kutarisa
Citizens Bank Zviri Zvirinani Zvirinani Bhizinesi Kutarisa
TD Bhizinesi Rekutarisa Kutarisa
US Bank Sirivheri Bhizinesi Kutarisa
Huntington Unlimited Bhizinesi Kutarisa
Navy Federal Bhizinesi Kutarisa
Axos Yekutanga Bhizinesi Kutarisa
BBVA Bhizinesi Kubatanidza Kutarisa
Azlo Bhizinesi Kutarisa
Iyo yakawanda yea ndeye emahara bhizinesi yekutarisa maakaunti. Vamwe vane mari inobhadharwa pamwedzi, asi zviri nyore kuti avo vanosunungurwa nekusangana zvine musoro zvinodiwa.
Ini ndichakupa iwe-yakadzika kuongororwa kweyepamusoro bhizinesi yekutarisa ma account pazasi. Tichafukidza epamusoro maficha, mabhenefiti, mitengo, uye chero chinokanganisa chinogona kutorwa mukufungwa.
Iyo Yakanyanya Bhizinesi Yekutarisa Maakaunti Akaunti
Chase Yese Bhizinesi Kutarisa yakakwana kune vanoita bhizinesi uye varidzi vemabhizinesi madiki. Iwe uchave nekwanisi yekuwana mapazi e4,900 uye maA16,000 zviuru gumi nemairi munyika.
Iko kune $ 15 yekubhadhara mari inobatanidzwa neakaundi. Asi mubhadharo wakabviswa kana iwe uchichengetedza zvishoma $ 1,500 zvishoma zuva nezuva kana kubatanidza yako pachako Chase yekutarisa account.
Kubatsirwa kwepamusoro uye kwakakwirira kweChase Yese Bhizinesi Kuongorora kunosanganisira:
Zvisina mwero zvemagetsi deposits
100 yemahara pamwedzi yekutengesa
Svika kusvika pamakore manomwe ezvirevo online
Pamhepo uye mobile Banking
Iwe unogona kuwana $ 200 nekuvhura Chase bhizinesi rekutarisa account. Ingoisa madhora chiuru mukati memazuva makumi maviri ekutanga, uye ita shanduko shanu dzakakodzera uchichengetedza iyo mazuva makumi matanhatu.
Pakazara, iyi nhoroondo inomira kune yayo yakanakisa 24/7 tsigiro yevatengi kune varidzi vebhizinesi.
Chase ine zvese zvekushandisa zvaunoda kuti ubate bhizinesi rako riri kukura, kusanganisira mamwe acho yakanakisa bhizinesi kadhi pamusika nhasi.
Kune avo iwe uchitsvaga yemahara bhizinesi yekutarisa account, usatarisa mberi Citizen Zvakajeka Zvirinani Bhizinesi Kutarisa.
Iwe hauzotofanira kunetseka nezve kusangana chero zvishoma zviyero zvinodiwa nekuti hapana mari yekuchengetedza. Izvi zvinoita zvakajeka Zvirinani Bhizinesi Kuongorora sarudzo yepamusoro kune varidzi vebhizinesi vanochengeta yakaderera bhangi bhandi.
Zvimwe zvepamusoro zvinosanganisira:
200 yemahara pamwedzi yekutengesa
Yakatsaurwa bhizinesi revatengi rutsigiro
Grant kuverenga-inongotenderwa kuwana account yako (yevanochengeta mabhuku uye maakaunzi)
Imwe inogona kudzoreredza Citizens Bank kukura kwayo. Ipo iyo kambani ine anopfuura matavi chiuru nemazana matatu nemakumi mairi emakumi mairi eAMA munyika, mazhinji acho ari kumahombekombe ekumabvazuva. Saka kana iwe uchizoda kushanyira bazi, kune chero chinhu, simbisa kuti kune Citizens Bank iri pedyo nebhizinesi rako usati wavhura account.
Kusiyana nemamwe maakaundi ekutarisa bhizinesi, Zvizvarwa zvemunyika hazvipe kusaina-kumusoro kukurudzira kweYakajeka Bhizinesi Kuongorora.
Novo imwe nzira yekubhengi retsika. Iyo online-yakasarudzika bhizinesi yekutarisa account yakagadzirirwa vanoshanda mahara uye mabhizinesi.
Ini ndaikurudzira Novo kune chero muridzi webhizinesi achitsvaga mhinduro yakatwasuka nemitengo yakajeka uye pasina mari yakavanzika. Unogona kunyorera account yeNovo isingasviki maminetsi gumi online.
Izvi ndizvo zvimwe zvezvinotarisisa zveNovo bhizinesi yekutarisa:
Hapana zvishoma zviyero zvinodiwa
Hapana mari yemwedzi yekugadzirisa
Mahara ACH anotamiswa
Mahara anouya mawaya
Mahara ekutumira mahara
Novo inokuita kuti uvhure bhizinesi idzva rekutarisa account nemadhora makumi mashanu chete.
Iyi ndiyo yemberi yemabhangi mhinduro. Unogona kubatanidza account yako neZapier, Xero, Slack, uye zvimwe zvishandiso izvo bhizinesi rako diki pariri kushandisa izvozvi.
Kufanana nechero online online chete bhangi, iwe haugone kufamba mune bazi remuviri. Saka kana bhizinesi rako riine mu-munhu banking inodiwa, saka Novo haizi yako. Nekudaro, Nevo achakudzosera iwe mari yeATM yakatemwa nemamwe mabhangi. Saka iwe uchazokwanisa kuwana mari kubva chero kupi pasina kubhadhara imwe mari yekuwedzera.
TD Bhizinesi Rekutarisa Kuongorora Plus
Unogona kuvhura a TD Bhizinesi Rekutarisa Kuongorora Plus account ne $ 100 chete. Nekudaro, iwe unofanirwa kuchengetedza yakakwana $ 1,500 zuva nezuva yekubvisa iyo $ 25 pamwedzi yekugadziridza mubhadharo.
Kana iwe ukabatanidza yako yega account yekutarisa kune yako Bhizinesi Yekutarisa Plus account, TD Bank inotora zviyero zvako zvakasanganiswa pakati pemaviri maakaunzi kusvika padiki yezuva nezuva. Saka ichi sarudzo chikuru kune varidzi vebhizinesi vatove neaka account ku TD Bank.
Ngationgororei zvimwe zvakanakira nhoroondo.
500 yemahara yekutengesa pamwedzi
Kusvikira madhora zviuru zvishanu mumadhizari emari pamutenderera
Zvitupa zvepamhepo uye mobile amana
Kusvika kune mana masayina
Nepo TD Bhizinesi Richiedza Kuongorora Plus ine yakakwira mari yekugadzirisa, iwe unozobatsirwa kubva pane akawanda emahara emwedzi yekutengesa. Nekufananidza, Chase Yese Bhizinesi Kuongorora ine mubhadharo wegumi nemashanu wemadhora chete kubva pamadhora zana.
Uyezve, zviri nyore kutambisa mubhadharo weTD $ 25 nekuchengeta yakaderera yakasanganiswa pakati peakaundi maviri.
Kunyangwe iwe uchiganhurirwa kumadhora mazana mashanu emari yemahara pamwedzi wega wega, iwe unongobhadharwa $ 5,000 pamadhora zana ipapo. Saka imwezve mari inosvika zviuru zvishanu zvemadhora yakaiswa mudenderedzwa (madhora zviuru gumi) yaizodhura $ 0.25. Izvo chete 100% yemadhiziki ako, iri padyo pasina chinhu.
TD Bank inokupa iwe kuwana kune mamwe masevhisi, sevatengesi zvigadziriso, zvikwereti zvebhizinesi, uye mitsara yebhizinesi yekwereti.
US Bank Sirivheri Bhizinesi Kutarisa iri 100% yemahara. Ivo vanoregedza $ 5 yemwedzi pamwedzi yekubhadhara mapepa zvirevo, asi unogona kubvisa mari iyoyo nekuenda usina mapepa.
Heano nhungamiro yezvakanakira account.
125 yemahara yekutengesa pamwedzi
Mobile uye online account account
50% ibva yekutanga odhi yemacheki
Dhijitari bhadharo kubhadhara
Chinhu chimwe chinoda kutariswa ishoko risinganzwisisike rinoti US Bank rinoshandisa kudzikamisa mari muhomwe. Iyo account inobvumidza "zvikamu" makumi maviri neshanu zvemari yemahara inochengetedza kutenderera kwega kubhadhara.
Mushure mekuverenga kudhinda kwakanaka, iwe uchadzidza kuti muyuniti unoverengwa nekukamhina dhipoziti rimwe nerimwe ne100 uye kutenderera kukosha kune nhamba iri pedyo zvachose.
Heino muenzaniso. Ngatitii muise $ 920.
Round 9.2 kutsika kusvika 9, uye iwe wakangoshandisa 9 kwako 25 zvikwereti zvemwedzi.
Iyi nzira yechikwereti inzira yakaoma yekutaura kuti iwe unosvika kumadhora mazana maviri nemazana mashanu emahara emari yemahara. Saka kana iwe uchigadzira mari muhomwe nguva zhinji, iyi account inogona kunge isiri iyo yakanakira sarudzo.
Huntington Unlimited Bhizinesi Kutarisa iri sarudzo yepamusoro yemasangano akakura. Kana iwe uine yepamusoro wepamwedzi transaction vhoriyamu, mamwe amaakaundi pane edu rondedzero haakwanise zvaunoda.
Izvo zvepamusoro maficha uye mabhenefiti eUsingaverengeki Bhizinesi Kuongorora kubva kuHuntington kunosanganisira:
Yemahara mameseji uye email ziviso
Kusvikira pamadhora zviuru gumi zvemahara emadhora pamwedzi wega wega
Huntington inobhadharisa madhora makumi maviri emamwedzi yekuchengetedza mari ino. Asi iyo yakadzoserwa ne zviuru gumi zvemadhora zvakasanganiswa pakati ako ese akakodzera Huntington Bank account.
Iine Unlimited Bhizinesi Yekutarisa account, Huntington Bank inokubvumira kusarudza imwe yeanotevera mabhonasi masevhisi zvakare:
Huntington dhipoziti scan (kusvika makumi mashanu pamwedzi)
10% kure kubhadhara mabasa
Mawaya maviri epachena anouya epamhepo pamwedzi
Dzadzoserwa zvinhu zvakaiswa (kusvika pa25 pamwedzi)
Iri bhangi rine chishandiso chinonzi "Iyo Hub" yekutarisa bhizinesi account. Iyo inouya nemadhijitari akati wandei ezvinhu zvakadai semari yekumisa uye kufambiswa kwemari. Iyo Hub ndeye yakakura sosi yekutarisira mari yako yemari uye yekushandisa.
Navy Federal Bhizinesi Kutarisa chisarudzo chepamusoro chekufunga kana iwe kana mumwe munhu mumhuri yako ari nhengo yeuto rine mauto, National Guard, kana DoD.
Iyo yakananga uye yakakosha nhoroondo, yakanakira kutanga uye ine yakaderera transaction vhoriyamu.
Chikamu chakanakira nezve account iyi ndechekuti iri 100% yemahara. Hauzombofa wakabhadharwa mari yemwedzi kana yekubhadhara mari.
Kutanga kwako kwekutanga makumi matatu emagetsi zvisiri zvemahara zvakasununguka. Mushure meizvozvo, iri madhora 30 kune chero mu-bazi makaisirwa, kubvisa, kana kuendeswa. Asi iwe unogona kuodha inosvika gumi nemaviri panguva imwe chete, uye ichaverengera seyese kutengeserana.
Chimwe chikonzero nei ini ndichida Navy Federal Bhizinesi Kuongorora imhaka yekuti ivo vane mamwe mabhangi ekugadzirisa mhinduro kuti uwane zvaunoda sezvo bhizinesi rinokura. Kana basa rako rekubhengi richinge rawedzera, funga kukwidza ku:
Navy Federal Bhizinesi Kuongorora
Navy Federal Bhizinesi Yekutanga Kutarisa
Maakaundi iwayo anodhura madhora masere nemadhora makumi maviri pamwedzi, zvichiteerana. Iyo yekutanga Mutero wekutarisa mari yekubatira inoiswa kana iwe uchichengetedza zviyero zvemadhora zviuru zvishanu pazuva.
Axos imwe online online chete bhangi. Saka kana iwe usina chero mu-munhu kubhengi zvido, iwe unofanirwa kufunga nezvazvo Axos Yekutanga Bhizinesi Kutarisa.
Heano maonero eakaunti
$ 1,000 madhora ekuvhura dhipoziti
Hapana muripo wemwedzi
Kusvikira mazana maviri emahara kutengeserana kutenderera ($ 200 nekutengeserana mushure)
Yakawedzera-isina ATM network
Iyo online uye mobile Banking mhinduro kubva kuAxos ndeyekusiyanisa, sezvaungatarisira kubva kubhuraneti-yakasarudzika bhangi. Iwe unogona kuisa cheki kubva chero kupi uchishandisa yako mobile kifaa.
Pakazara, Axos Basic Bhizinesi Kutarisa yakakodzera kune varidzi vashoma ebhizinesi ane mwero kubhengi zvinodiwa.
BBVA ine mhinduro dzemabhangi emahara emabhizinesi madiki. Sole proprietors vanogona kunyorera pamhepo pa BBVA Bhizinesi Kubatanidza Kutarisa account. Mamwe mabhizinesi mhando anoda kunyorera pabazi.
Heano kuongororwa kwezvakanakira account uye zvakakwirira:
Hapana kubhadharwa kwemwedzi nemwedzi
Mahara emadhijitari bhadharo
Yemahara pamhepo nemabhangi emahara
$ 100 madhora ekuvhura dhipoziti
$ 5,000 yemari deposits pamwedzi pasina muripo
BBVA inokupa mahara unternet un un transaction mwedzi wega wega, mhando ye. Iwe uchawana maviri mune-bazi dhipo, uye mashanu mu-bazi kubviswa kana kuongororwa mashereni mwedzi wega. Zvimwe zvese kutengeserana hazvina muganho pasina muripo.
Iwe uchazowana chete BBVA matavi mune anotevera anoti:
Nekudaro, iwe uchange uine mukana kune network ye 55,000+ maATM munyika yose. Ndokusaka BBVA ishamwari yeAllpoint. Iko hakuna mari yeATM muAllpoint ATM uye nenzvimbo dzegumi nenomwe.
Azlo Bhizinesi Kutarisa yakasarudzika yakasarudzika kana ichienzaniswa nedzimwe sarudzo pane yedu zvinyorwa. Iyi online-chete yekubhengi mhinduro inogadziriswa kune vanoita zvega zvega uye mabhizinesi.
Iyo kambani yakananga kwazvo mukutaura kuti ivo havana kukodzera kumabhizinesi ese. Azlo haagamuchire muhomwe mari kana kupa mabhuku ekutarisa. Saka zvakangokodzera kumabhizinesi anotumira uye anotambira mubhadharo wedigital.
Nezvakataurwa, nhoroondo yacho ine zvayakanakira.
Hapana diki dhipoziti
Gadzira uye gadzirisa tsika invoice edhijitari
Bhadhara vatengesi, ma freelancers, uye iwe pachako
Kunoshamisa mobile Banking app
Nyorera online mumaminitsi
Azlo inobatanidza nemapuratifomu seStripe, PayPal, Square, QuickBooks, uye Xero.
Pakazara, Azlo inzira yemazuva ano yevanoshanda mahara kuenda kune avo emabhangi online. Asi zvirokwazvo haina kukodzera munhu wese.
Maitiro Ekuwana Bhizimusi Rakanakisa Rekutarisa Akaundi kwauri
Ese mabhizinesi ekutarisa maakaunzi haana kugadzirwa zvakaenzana. Chisarudzo chakanakira bhizinesi rimwe chete chingave chisina kukodzera chako.
Iyi ndiyo nzira yaunofanirwa kushandisa paunenge uchiongorora maakaunti ekutarisa bhizinesi. Ini ndichatsanangura chinhu chimwe nechimwe zvakadzama pasi apa.
Mari yekushandira uye yemwedzi nemwedzi yekubhadhara mari inozivikanwa kune bhizinesi rekutarisa maakaundi. Muzviitiko zvakawanda, mari idzi dzinowira pane imwe nzvimbo mumadhora gumi kusvika pamadhora makumi mana.
Asi kuchine akawanda emabhizimisi emahara mabhangi ekugadzirisa. Muchokwadi, matanhatu matanhatu pane gumi maakaundi pane edu runyorwa haana mari yemwedzi. Nepo ina dzasara dziine mitengo, iwe unogona kuvasunungura zviri nyore nekuchengeta yakaderera account account.
Hapana chikonzero chekubhadhara mari idzi kana uchigona kudzivirira.
Mamwe mabhanga anoda diki rekuvhura dhipoziti. Saka sarudza bhengi rine inovhurwa yekuvhura dheti shoma zvichienderana nemamiriro ako.
Kana iwe uri kutanga kutanga uye usati uine toni yemari paruoko, unogona kuvhura mamwe maakaundi nemari shoma seUS $ 50 kana madhora zana. Mamwe mabhangi haadi dhodhi rekuvhura shoma zvachose.
Pamusoro pekuvhurwa kwedhisheni inodikanwa, mamwe maakaunti anokubhadharira iwe uchidzika pasi peimwe zvishoma zviyero zvezuva nezuva. Ita shuwa kuti mari yako inoyerera yakakwana kuchengetedza zvaunoda zvishoma pasina kurangwa.
Ma account ako ekutarisa haazowanzo kana, zvichabvumikisa huwandu hwekutengesa iwe hwaunogona kuita mukubhadhara mari Asi izvo hazvisizvo zviitiko zvebhizinesi rakawanda rekutarisa.
Zvichienderana nebhangi, zviitiko senge amana, kubvisa, uye kuendeswa zvinotariswa kunosvika kumugumo wemwedzi. Mamwe mabhangi anozodzora huwandu hwekutengesa-munhu iwe hwaunogona kuita uchinge uchipa zvemahara zvemagetsi zvemahara.
Kune iyo yakawanda chikamu, mahara pamwedzi transaction miganhu inotangira pa100.TD Bhizinesi Rekutarisa Kubvumidza kunobvumira mazana mashanu emahara kutengeserana pamwedzi. Mamwe mabhangi anokupa iwe kusagadziriswa kwekutenderera, uine mashoma mafashoni.
Iwe unobhadhara kamari kadiki pane imwe neimwe yekutengeserana pamusoro peyako yemwedzi wega Izvi kazhinji kazhinji pane imwe nzvimbo iri mumadhora mazana maviri nemakumi mana nemashanu kusvika kumadhora mazana mana emakumi mashanu.
Mobile Banking uye Online Kuwanikwa
Bhengi rega rega rinopa imwe nzira yekuwana yako account online kana kuburikidza neye runharembozha. Asi nezvakataurwa, mamwe edhisheni mhinduro ari nani pane vamwe.
Sarudza bhizinesi rekutarisa iro rinoita kuti uise dhisiki kure, seta machenjedzo eakaunti, uye ubhadhare mavovovo pachako.
Ini ndinoita rinenge rese bhizinesi rangu kubhengi kubva parunhare mbozha, uye ndine chokwadi kuti iwe uchada izvo nyore zvakare.
Mamwe mabhangi akanangana nedunhu, nepo mamwe ari makuru emaketani emunyika. Izvo zvakakosha kusarudza bhangi padhuze nebhizinesi rako nzvimbo kana iwe uchida kuwana bazi kune chero chinhu.
Nekudaro, kune akati wandei ebhizimusi ekuongorora maakaunzi ari online-ega. Aya mabhangi haana kana nzvimbo dzepanyama. Asi izvo mhinduro hazvisi zvemunhu wese. Semuenzaniso, kana bhizinesi rako rinogamuchira mari, unenge uchinyatsoda kuwana kubazi rezvemukati mavo mune munhu muhomwe.
Online-chete kubhengi kunozivikanwa chaizvo kune vanoita zve freelancers uye mabhizinesi anoshanda kure uye kugamuchira digital kubhadhara.
Yekuwedzera Bhangi Services
Izvi zvinogona kunge zvisina kukosha kwauri nekukasira, asi zvakanaka kuva nebhengi rinokupa mamwe mabasa sekuti bhizinesi rako richikura.
Kunyangwe iri mutengesi masevhisi e kiredhiti kadhi kugadzirisa, maakaundi akawedzera, kana bhizinesi chikwereti kana mutsara wechikwereti, zviri nyore kuti uwane izvi kubva kubhengi uko iwe uine hukama huripo.
Gara uchingotarisa kune chimwezve chinhu icho bhangi chinofanira kupa kupfuura chako chaunotarisa cheki account nhasi.
Wese muridzi webhizinesi anoda bhizinesi rekutarisa account. Asi munhu wese ane dzakasiyana bhangi zvinodiwa, ndosaka kuwana yakanakisa bhizinesi yekutarisa mhinduro inogona kuve yakaoma.
Aya ndiwo gumi epamusoro bhizimusi rekutarisa maakaundi pamusika nhasi:
Chase Yese Bhizinesi Kuongorora - Yakanyanya kutarisa account kumabhizinesi madiki.
Citizens Bank Zvirinani Zvirinani Bhizinesi Kutarisa - Mahara bhizinesi rekutarisa account isina hushoma hwebhari zvinodiwa.
Novo - Yakanakisa online-bhizinesi chete rekubhanga kwevane freelancers uye mabhizinesi.
TD Bhizinesi Rekutarisa Kuongorora - Kusvikira mazana mashanu emahara kutapurirana mwedzi wega wega.
US Bank Sirivhe Bhizinesi Kutarisa - Yemahara yekutarisa account yakanakira mabhizinesi ine yakaderera pamwedzi transaction vhoriyamu uye mari inowanikwa pasi pemadhora mazana maviri nemazana mashanu pamwedzi.
Huntington Unlimited Bhizinesi Kuongorora - Unlimited transaction zvakanakira mabhizinesi makuru ane mari yakakwira kuyerera.
Navy Federal Bhizinesi Kutarisa - Yakanyanya kune yekutanga uye vashoma mabhizinesi emabhizinesi akasunga mauto ane mauto.
Axos Basic Bhizinesi Kutarisa - Online-yakasarudzika bhangi isina mari yemwedzi.
BBVA Bhizinesi Kubatanidza Kuongorora - Yakanyanya bhizinesi bhangi kune wega proprietors.
Azlo Bhizinesi Kutarisa - Yakanakisa online bhengi revasununguka vanotambira uye kugamuchira yemajidhiji mubhadharo (hapana mari yedhisiti).
Iko kune account yeese rudzi rwebhizinesi pane iyi runyorwa. Kubva kune freelancers uye kutanga kune mabhizinesi madiki nemasangano akakura ane huwandu hwekushambadzira huwandu, ndine chivimbo kuti iwe unogona kuwana account yekutarisa kubva pane imwe sarudzo pamusoro.
Yakanyanya Kiredhiti Kadhi Kugadzirisa Services
Maitiro ekuwana kwako kukurudzira kubhadhara kukurumidza: Seta zvakananga dhipatimendi ne IRS
Maitiro Ekuvhura Iyo Yakagadziriswa Deposit paGoogle Kubhadhara; Zvinhu Zvokuziva
Iwo Akanakisa Nhare Nhare dzeBhizinesi Diki
Aya ndiwo akarongwa zvakachipa ehurongwa aunogona kutenga muUS
Yakanakisa inodhura UK SIM-chete nharembozha inobata isina muganho kana mizhinji yedhata